Sida loo daryeelo lamaanahaaga inta aad uurka leedahay - Talooyin ku saabsan lamaanayaasha | Ragga Stylish
Muddada uurka haweeneydu waa daqiiqad xamaasad leh, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah khilaafaadka shucuureed ee ku saabsan culeyska tani ay leedahay. Haweeneydu waa inay wajahdaa nolol kale, nidaamka hoormoonka ayaa isbedelaya taasna waxay u tarjumi kartaa maalmo murugo leh. Xitaa uurka shucaaca farxadda ayaa ka wanaagsan oo waa loo dulqaadan karaa haddii lammaanaha ku weheliya uu ku ag joogo maalinba maalinta ka dambaysa.
Sida loo daryeelo lamaanahaaga inta aad uurka leedahay Waa dabeecaddaas mahadnaqa ah si qofkaas aad jeceshahay uu kuu siiyo wax aad u yaab badan. Waxaad ogaan doontaa wadaagista daqiiqadaha maalinlaha ah inay ka caawin doonto iyaga inay helaan xasillooni badan oo maskaxeed taasna waxay ka dhigeysaa xiriir dareen badan leh sababo lagu kalsoonaan karo.
1 Daryeelka lamaanahaaga inta aad uurka leedahay
2 Maxay yihiin xaaladaha taageerada ugu fiican?
Daryeelka lamaanahaaga inta aad uurka leedahay
Haddii aad leedahay lammaane uur leh oo caafimaad qaba oo aan u horseedin gaabis, markaa waxaad ku jirtaa tababar wanaagsan taas waxaad heli kartaa waqti uur fiican. Laakiin halkan kama joogno in daqiiqadahaas oo dhan la xalliyo, waxaa muhiim ah in aabaha mustaqbalka ogaadaa gacantiisa dhamaan baahiyaha uu u baahan karo hooyadaas mustaqbalka iyo goorta ay ficil samaynayso.
Waa muhiim in qofka xigta naagtaada ogyahay sidee u yihiin isbeddelada noocan ah gudaha jirkaaga. Waxaa jira haween aan aqoon sida ugu wanaagsan ee loo maareeyo uurka. Isbedelada ugu waaweyn ee badanaa la matalo ayaa ka sarreeya dhammaan daal, dhabar xanuun, isbeddelka cuntada iyo daqiiqadaha aan si fiican ugu adkeysan shucuur ahaan xaaladdiisa hormoon. Halkan ninku waa inuu fahmaa daqiiqad kasta oo uu ku siiyaa dhammaan taageeradiisa, taasi waa sababta uu u baahan yahay inuu ogaado sida loo maareeyo sida loo daryeelo lammaanihiisa muddada uurka.
Maxay yihiin xaaladaha taageerada ugu fiican?
Ka caawi howlaha maalinlaha ah. Daal iyo daal ayaa ka mid ah astaamaha ugu horreeya saddexda bilood ee ugu horreeya uurka. Jidhku wuxuu bilaabayaa inuu la qabsado dhamaan isbeddeladaan waxaana jira haween aan si wanaagsan u maaraynin. Abaabulaan qorshe taageero ah halkaas oo shaqooyinka maalinlaha ahi ay noqdaan wax aad loogu adkeysto. Nadiifinta iyo kaawaynta dharka, sameynta cuntada, xoqista ... iyo xitaa dukaameysiga.
U raacso booqashooyinka caafimaad. Uurkaaga gudahiisa waxaad u baahan doontaa inaad tagto wadatashiyo kala duwan, kaalmada umulisada waxay noqon doontaa midda ugu horreysa uguna caansan. Markasta oo aad raaci karto iyada, sidaa darteed waxaad dareemi doontaa firfircooni badan. Waa muhiim inaad u tagto baaritaanka dhakhtarka dumarka waqtiga ultrasounds, Waa daqiiqad qiiro leh labadiinaba.
Ka caawi dhammaan isbeddeladaas ay la kulmi karto oo iyada ay ku adag tahay in ay la qabsato. Cudurka subaxnimadu waa mid ka mid ah hababka ugu xun iyaga. Waxaa jira kuwa la kulma maalinta oo dhan iyo inta ay uurka leeyihiin oo dhan. Kaqeybgal raadinta dawo lagu yareeyo ama leyendo xoogaa cashar ah oo ku saabsan sida loo fududeeyo waqtiga.
Iska ilaali urta adag. Tani waa kicinta ugu weyn ee u keenta jir xun ama bilowga lallabbadaas. Ka fogow sigaar cabista deriskaaga, iibso cadar leh ur xoog leh ama dabeecad aad uwanaagsan gaar ahaanna cuntooyin aad u xoog badan sida kalluunka.
Ku taageer saacadaha hurdada. Ma noqon karto wax badan bilowga, laakiin dhamaadka marxaladdaada waa daqiiqad aad u dhib badan, ma ogaan doontid sida loo seexdo maxaa yeelay ma heli kartid booska ugu habboon. Waqtigan xaadirka ah waxaad siin kartaa hamiga ah inaad hadiyad siiso, sida barkin jidh buuxa ama faleebo nasasho leh.
La shaqee dhammaan waxyaalahaas damaca ah ee aysan awoodin. Haddii ay ahayd inaad u joojiso cabitaanka ama sigaar cabista uurkaaga dartiis, ha ku dhiirrigelin ama ha u soo bandhigin waxyaalahaas damac leh si joogto ah Horteeda. Xaqiiqdii waxaad ku adkaan doontaa inaad ku adkaato inaad la'aanteed sameyso.
Waxay ka caawisaa isu diyaarinta dhalmada. Tani waa daqiiqad dhif ah in lagu dhaqmo, laakiin xaaskaaga waxay dareemi doontaa wax badan oo firfircoon oo ka mid ah xiisadahaan oo kalsooni badan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa imaan doonta waqtiga ay tahay inaad aado cisbitaalka waana inaad ku diyaar garowdaa tamar iyo ogaanshaha sida aad ku dhaqaaqi lahayd waqtigaas.
Ka qayb qaado daqiiqadaha sixirka uurka. Hadaad jeceshahay sawir qaadista waad awoodaa kugu dhiirigelinayaa inaad sawirro la gasho iyada. in boostadan waxaad haysataa soo jeedin asal ah oo ku saabsan sida loo qaado sawirro fudud oo cajiib ah. La hadal ilmahaaga markuu caloosha ku jiro oo aad dareento laadkiisa markuu dhaqaaqayo. Isku day inaad qiyaasto oo aad qiyaasi karto sida qaybaha jirka ay u egyihiin dhaqaaqa iyo waxa uu ahaan doono muuqaal ahaan.
Isaga sii dhammaan koolkoolinta uu u baahan yahay iyo in ka badan. Kaqeyb qaado quirrada qaarkood iyo raaxada deegaankaaga dhexdiisa. Waxaad ka fikiri kartaa inaad siisid foojarka duugista, socod fiican ku sameysid xeebta, ku martiqaad casho jaceyl ah ama safar raaxo leh oo xasilloon usbuuca.
Leedahay dabacsanaanta galmada. Ma jiraan wax dhibaato ah oo ka yimaada galmada inta aad uurka leedahay laakiin waa inaad iska ilaalisaa inaad riixdo waqtigaas. Sida caadiga ah, rabitaankaagu wuu yaraan karaa bilaha ugu horeeya iyo kan ugu dambeeya, marka ixtiraam daqiiqadahaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo daryeelo lamaanahaaga inta aad uurka leedahay